श्रीमती र वालबच्चाको बिल्चल्ली पार्दै जसले मध्यराति फेसबुकमा “समाप्त” लेखेर आत्महत्या गरे
ARCHIVE, NEWSPAPER » श्रीमती र वालबच्चाको बिल्चल्ली पार्दै जसले मध्यराति फेसबुकमा “समाप्त” लेखेर आत्महत्या गरे
फेसबुकमा समाप्त…. लेखेर एक युवकले आत्महत्या गरेका छन । उनि हुन् त्रियुगा नगरपालिका वडा नं.११ निवासी अन्दाजी २१ बर्षिय सुशील कोइराला । उनले बिहिबार मध्यराति १ बजेर २० मिनेट जाँदा आफनो फेसबुक ‘समाप्त’ शब्द लेखेर त्यस पछी गलामा पासो लगाई झुण्डिएर आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी गराए ।
प्राय जसो उनको फेसबुकमा पीडादायी र निराशाजनक शब्दले भरिएका साहित्यीक वाक्यहरु लेख्दै आएका थिए । प्रहरीका अनुसार कोईराला मानसिक तनाबमा रहेको जस्तो देखिएको छ । प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी नरबहादुर केसीले बताए ।
केही समय देखि आफन्त भन्दा टाढा बस्दै आएका शुसिल पाँच सात दिन अगाडी मात्रै श्रीमती र साना साना दुई छोराहरुलाई ससुराली काठमाडौं छोडेर गाईघाट फर्केका थिए । श्रीमतीलाई अघिल्लो दिन मात्रै छिटै घर आउनु भनेका उनले त्यहि रात आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी नरबहादुर केसीले बताए ।
जव श्रीमती विहिबार विहान करिब १० बजे तिर घर आईपुगिन कोठा बन्द थियो । त्यसपछी श्रीमतीले छिमेकीको साहायतामा ढोका खोल्दा श्रीमान झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको श्रीमतीलाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ । उनको शव शनिबार दिउसो पोष्टमार्टम पछि परिवारलाई जिम्मा लगाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कोइरालाले बुधबार राति १० बजेर १० मिनेटको समयमा फेसबुकमा लगालग ३ ओटा पोस्ट गरेका थिए , ति सबैमा पिडा थियो, बिछोडको बेदना थियो।
बुधबार राती करिब १२ बजेर ४५ मिनेट जादा उनले यस्तो पोस्ट गरेका थिए :
‘ए रात आईज न ल
मरूँ के अब …….?’
त्यसको ३ मिनेट पछी नै यस्तो पोस्ट गरेका थिए :
‘समय र भाग्यको यो
भैछस पापी तँ …..’
त्यसको २ मिनटको अन्तर मै “अलक्षिना” शिर्षकमा यस्तो पोस्ट गरेका थिए, जुन कसैलाई इसारा गरेर लेखिएको देखिन्छ ।
“मैले गर्दा र म उ सँग नजिक हुँदा उस्लाई नराम्रो हुने रहेछ । जब जब म उ सँग नजिक भएँ तब तब उ कुनै न कुनै भुमरीमा फस्न थाल्यो । हिजो थाहा पाएँ मैले , म उ बाट टाडै बसेको राम्रो भन्ने कुरा । म र मेरो यादहरूले सायद उस्लाई कुनै भुमरीमा पो फसाउँछ की ? मेरो सरिर त उ बाट टाडै राखुँला , तर के मेरो मन उ बाट टाडा राख्न सक्छु होला र ..?'
उनले लेखेका छन् - 'जन्मेको दिन र बार अनी समय त राम्रै थियो मेरो । तर म किन उस्को लागी अलक्षिना बन्न पुगेँ .. के म सचै नै अलक्षिना हो ।”
यि सबै पिडादायी स्ताट्सहरु पोस्ट गरेको करिब ३० मिनेट पछि उनले अन्तिम पोस्ट ‘समाप्त…….’ लेखेर यो संसार त्यागेका थिए ।
(फोटो : सुशील कोइरालाको फेसबुक प्रोफाइलबाट)